ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ရပ်ဆိုင်းလိုက်ရတဲ့ ကျိန်စာသင့်တိုကျိုအိုလံပစ်? - JAPO Japanese News
ဟူး 25 Mar 2020, 11:18 မနက်
၂၀၂၀ခုနှစ်မှာ ကျင်းပမယ့်တိုကျိုအိုလံပစ်က ဒီရပ်တန့်မှောင်မိုက်နေတဲ့ စီးပွားရေးထဲကခုန်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြီးမားတဲ့အပြောင်းအလဲကြီးဖြစ်ဖို့အတွက် အဓိကထားပြီးကျင်းပနိုင်ဖို့ဆိုတာ အသေအချာပါပဲ။
သို့ပေမယ့်…….ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်နဲ့ စပ်လျဥ်းပြီးရပ်ဆိုင်းရမယ့်အခြေအနေက ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလာပြန်ပါတယ်။
အိုလံပစ်အိမ်ရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတယ်ဆိုတာက ကြီးမားတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ အစိုးရအသုံးစရိတ်တစ်ခုတည်း ယန်း ၁.၆ ထရီလီယံကျော်ကုန်ကျခံခဲ့ရပြီး တိုကျိုမြို့နဲ့ အခြားကုမ္ပဏီများရဲ့ အိုလံပစ်အတွက် ကုန်ကျစာရိတ်များပါ ထည့်သွင်းစဥ်းစားတွက်ချက်လိုက်မယ်ဆိုရင် ကုန်ကျစရိတ်တွေက တော် တော် ကိုများပါတယ်။
ဒါတွေကရပ်တန့်သွားတဲ့အခါမှာတော့ အားလုံးသုညဖြစ်သွားရတာပေါ့ ….
ရက်ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ ကြီးမားတဲ့ပြဿနာနဲ့ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရပါတော့မယ်။ ကျင်းပဖို့အတွက် ကြိုတင်စီစဥ်မှုများနဲ့တာဝန်ယူမှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို စီစဥ်ထားတဲ့အတိုင်းပြုလုပ်နိုင်ဖို့ သေချာအချိန်ယူထားရတာပါ။
အခုလို အများကြီးစီစဥ်ထားပြီးမှ ဒီအချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။
သတင်းစာထဲမှာလည်း ရက်ရွှေ့ဆိုင်းဖို့အတည်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ သေချာနေပါပြီ !!!!
အမှန်က တိုကျိုအိုလံပစ်ကို ဖျက်သိမ်းတယ်ဆိုတာက ဒီတစ်ကြိမ်တည်းမကတော့ပါဘူး!!!!
၁၉၄၀ခုနှစ်တုန်းက ကျင်းပဖို့စီစဥ်ခဲ့တဲ့တိုကျိုအိုလံပစ်ကိုလည်း ဖျက်သိမ်းခဲ့ဖူးပါတယ်။
၂၀၂၀ခုနှစ်ရဲ့ တိုကျိုအိုလံပစ်ဟာဆိုရင် ၂၀၁၁ခုနှစ်ရဲ့ ကြီးမားတဲ့ဂျပန်အရှေ့ပိုင်းငလျင်ဒဏ်ခံခဲ့ရာမှ နှိုးထမှုသင်္ကေတအနေနဲ့
၁၉၄၀ ခုနှစ်အိုလံပစ်တုန်းက Kanto ဘက်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ကြီးမားတဲ့ငလျင်ဖြစ်ပွားရာမှ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးသင်္ကေတအဖြစ် ကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အင်….ဇာတ်လမ်းရဲ့ အစကအတူတူပဲဖြစ်နေတယ်နော် …
ပြီးတော့ ၁၉၄၀ခုနှစ်ရဲ့ အိုလံပစ်ဖျက်သိမ်းခဲ့ရခြင်းက ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြောင့်ဖြစ်ပြီး…..
၂၀၂၀ခုနှစ်ရဲ့ အိုလံပစ်က ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းဖျက်သိမ်းဖို့ ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၂ခုလုံးက တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်နေတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပါ…
အဲ့သည်လောက်တောင် ပြင်းထန်တဲ့အိုလံပစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာကျင်မှုကိုခံစားရတဲ့ တစ်ခုတည်းသောမြို့ဟာ တိုကျိုပဲလား?!!!!
ဒါဟာ ကျိန်စာလား? လို့တောင်တွေးမိစေတဲ့ တိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုပါပဲ။
နိုင်ငံတွေ မြို့တွေ ပြည်သူတွေဟာလည်း အရေးကြီးပြီး၊ ငွေဆိုတာလည်းအရေးကြီးတဲ့အရာ ဖြစ်ပေမဲ့၊
ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ အားကစားသမားတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်….။
ဒါ့ကြောင့် လူတိုင်းစိတ်ကျေနပ်မှုရစေနိုင်ပြီး၊ အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ နည်းလမ်းမျိုးနဲ့အိုလံပစ်ကို ကျိန်းသေကျင်းပပေးစေလိုပါတယ်!!!!
ဂျပန်လူမျိုးတွေတော်တော်များများ ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရတဲ့ Ig Nobel Prize ဆိုတာက ?
ဘယ်သွားသွားသယ်သွားလို့ရတဲ့ ခေါက်ဆိုက်ကယ် !!!!